Mogadishu Journal » Madaxweynaha cusub Puntland oo la kulmay taliyaasha ciidamada Puntland
Madaxweynaha cusub Puntland oo la kulmay taliyaasha ciidamada Puntland
Mjournal :-Madaxweynaha cusub ee Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta la kulmay taliyaasha iyo saraakiisha ciidamada Puntland isagoo kala hadlay adkeynta ammaanka Puntland.
Madaxweynaha cusub ee Puntland oo uu kulankan ku wehelinayay Madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan ayaa isbarasho kadib waxaa ay kala hadleen taliyaasha ciidamada inay sugaan ammaanka isla markaana kala shaqeeyaan maamulka cusub sidii loo sugi lahaa amniga iyo kala dambeynta.
Madaxweyne Deni ayaa ku ammaanay Saraakiisha Ciidamada sidii ay adkeyeen ammaanka Garowe xilligii doorashadda.
Taliyaasha ciidamada Puntland ayaa uga warbixiyay Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka cusub ee Puntland xaalada ciidamada iyagoo sheegay in ay jiraan ciidamo aan mushaar qaadan bilooyin faro badan.
Waa markii ugu horeysay ee Madaxweynaha cusub ee Puntland uu kulan gaar ah la yeesho saraakiisha ciidamada maamulka Puntland.
Ingiriiska oo Qorsheynaya inuu Saldhig Milatari ka furto magaalada Berbera
Baadari Kenyan ah oo Muqdisho ka wadda faafinta Kiristaanimada